ဗေဒင် ကံကြမ္မာဟောခြင်းတွေဟာ လက်ရှိအချိန်တွေကို ထင်ဟပ်လေ့ရှိကြပြီး သင့် အကြောင်းကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုကုန်ဆုံးခြင်းလည်း၊ ဘယ်အချိန်က စတင်လို့ကောင်းလည်း နှင့် လက်ရှိအဖြစ်အပျက် တွေကို ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ Tarot Card နဲ့ အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အသေးစိတ်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် ဟောစာတမ်းတွေကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ဗေဒင်ဆရာများကိုယ်တိုင် ဟောစာတမ်း ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းများ အလုပ်တွင် အတိုက်အခံပေါ်တတ်သည်။
အလုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး နေရာကောင်းရခြင်း၊ နာမည်ကောင်းရခြင်းမျိုးကြုံတတ်သည်။
ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းကောင်းများကြားရတတ်သည်။
အချစ်ရေးတွင် အနည်းငယ် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။
ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အစာမှား၊ ဆေးမှားဖြစ်တတ်သည်။
ဘာပဲလုပ်လုပ် အခက်အခဲလေးတွေ ပြီးမှ အဆင်ပြေနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံသစ်များ ရရှိမည်။
ပျိုရွယ်သူများ ချစ်သူနှင့် ဝေးနေရတတ်သည်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးတွင် အခြေအနေကောင်းများ ရလာတတ်သည်။
ဝန်ထမ်းများ အကြီးအကဲများကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။
လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခရီးထွက်ရတတ်သည်။
ဝန်ထမ်းများ ရာထူးအတွက် လူတွေ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းခံရတတ်သည်။
ပျိုရွယ်သူများ အိမ်ထောင်ရှိသူနှင့် ငြိစွန်းတတ်သည်။
ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ခေါင်းကိုက်၊ ဇက်ကြောတက်ဖြစ်တတ်သည်။
လုပ်ငန်းများအတွက် အခြေအနေကောင်း အကူအညီကောင်းများရလာနိုင်သည်။
အိမ်ထောင်ရှင်များ သားသမီးများကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတတ်သည်။
သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗေဒင်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ!
ငွေရေးကြေးရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး နှင့် အချစ်ရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းစတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာကို ဆန်းစစ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပါသလား? သင့်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဟောစာတမ်းကို နာမည်ကျော် ဗေဒင်လက္ခဏာ ပညာရှင်များမှ တွက်ချက်ပေးမည့် အထူးဝန်ဆောင်မှုကို တယ်လီနောမြန်မာဝက်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ရယူနိုင်ပါပြီ။ သင့်ရဲ့ တယ်လီနောဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အခုပဲ login ဝင်ပြီး သင့်ကံကြမ္မာကို မေးမြန်းလိုက်ပါ။
တစ်နေ့တာ နံပါတ်တွေကို ကံစမ်းရအောင်!
ဒီ ကံကြမ္မာလှည်းဘီး လှည့်ပြီး ကံကောင်းတဲ့ နံပါတ်လေးတွေက ပြောတဲ့အကြောင်းကို ဖတ်ကြရအောင်။
ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုကို တယ်လီနော သုံးစွဲသူအားလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုတွင် Hotline ဝန်ဆောင်မှုအပြင် တယ်လီနောမြန်မာ website တွင် အခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်သော ယေဘုယျ ဟောစာတမ်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဟောစာတမ်း စသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ Hotline - အသုံးပြုသူသည် သတ်မှတ်ထားသော Short Code နံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံမည်ကြီး ဗေဒင်ဆရာများ နှင့် စကားပြောဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်မိနစ်ကို ၅၂၅ကျပ် (ကုန်သွယ်ခွန်ပါဝင်ပြီး) နှင့် ကျသင့်ငွေကို ပင်မလက်ကျန်ငွေထဲမှ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူသည် နေ့အလိုက် နေ့စဉ်ဟောစာတမ်း၊ Tarot Card ယေဘုယျဟောစာတမ်း နှင့် နေ့စဉ် ကံကောင်းစေသော ကိန်းဂဏန်းဟောစာတမ်း များကို Telenor Website တွင် အခမဲ့ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါမည်။
အသုံးပြုသူသည် ၄င်းတို့၏ နံမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ မွေးရက် ၊ မေးလိုသည့် နှစ်သက်ရာ ဗေဒင်ဆရာကို ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် နှစ်သက်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ခြင်း တို့ကို အသုံးပြုသူ ကိုယ်တိုင် ၄င်းအတွက် ကိုယ်ပိုင်ဟောစာတမ်းကို ရယူမေးမြန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူသည် ၄င်းတို့၏ အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ မွေးရက်၊ ၊ မေးလိုသည့် နှစ်သက်ရာ ဗေဒင်ဆရာကို ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် နှစ်သက်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ခြင်း တို့ကို အသုံးပြုသူ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ကာ ၄င်းအတွက် ကိုယ်ပိုင်ဟောစာတမ်းကို ရယူမေးမြန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူ ဖြည့် စွက်ထဲ့သွင်းလိုက်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ ကို တယ်လီနောမြန်မာ လီမိတက်ကအလုံခြုံဆုံးထိန်းသိမ်းပေးထားမည် ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဗေဒင်ဆရာထံသို့သာ လွှဲပြောင်းပေးပို့သွား မည် ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းရေးသားထားသည့် အထက်ပါ (နံပါတ် ၄ တွင်ဖော်ပြပါ) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို အသုံးပြုသူ အသိအမှတ်ပြုထားသည့်အတိုင်း ဗေဒင်ဆရာထံသို့ ပေးပို့ကာ အသုံးပြုသူ မေးထားသည့်အတိုင်း ၄င်းအတွက် ဟောစာတမ်းကို ရယူမည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူသည် ၄င်းကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြုရွေးချယ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူ၏ ပင်မလက်ကျန်ငွေထဲမှ ကောက်ခံသွားမည်ကို သိရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းရေးသားထားသည့်အထက်ပါ (နံပါတ်၄တွင်ဖော်ပြပါ) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုသူအသိအမှတ်ပြုထားသည့်အတိုင်းဗေဒင်ဆရာထံသို့ပေးပို့ကာအသုံးပြုသူကမေးမြန်းထားသည့်အတိုင်း၄င်းအတွက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကိုရယူမည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
သုံးပြုသူကိုယ်တိုင် မေးထားသည့်၄င်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဟောစာတမ်းကိုအသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တွင်ရက်၂၀တိတိအထိဒေါင်းလော့ဒ်ပြုလုပ်ကာသိမ်းဆည်းဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ရက်၂၀ကျော်လွန်သွားပါကထိုဟောစာတမ်းကိုအလိုအလျှောက်ဖျက်သိမ်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်အသုံးပြုသူသည် သူကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည့် ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို ကို်ယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြု ထည့်သွင်းရေးသားကြောင်း တာဝန်ယူပါသည်။
အသုံးပြုသူသည် မိမိသဘော ဆန္ဒအလျောက် ဖြည့်စွက်ပေးအပ်လိုက်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ နှင့် စပ်လျဉ်းသမျှ တာဝန်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဗေဒင်ဆရာ ကခန့်မှန်း တွက်ချက်ပေးလိုက်သော ဗေဒင်ဟောစာတမ်း၊ ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်း ခန့်မှန်းမှု နှင့် တွက်ချက်မှု အရည် အသွေး များ ကြောင်း အသုံး ပြုသူ က ခံစား ရနိုင်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နာကျင်ခံစားရမှု များ ၊ နစ်နာ မှုများ ကို မှု တယ်လီနော မြန်မာ လီမိတက် က လုံး ၀တာဝန်ယူဖြေရှင်း ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
ထို့ပြင် ထိုကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ထားသော ဗေဒင်ဆရာထံသို့ ကိုယ်ပိုင်ဟောစာတမ်း ရယူနိုင်ရန် ပေးပို့ပေးမည်ကို လည်း သိရှိ လက်ခံသဘောတူရှိပါသည်။